Archive du 20200515
Serge Zafimahova “Mila mitandrina isika mba tsy holalaovin'ny olona”
Adihevitra diso ny fanitaran-dresaka mikasika ny Institut Pasteur de Madagascar na IPM ,satria samy frantsay, izany hoe miara-miasa, na ny IPM na ny Centre d'Epidemiologie Charles Mérieux,
Gangstabab sy ny APM "Tsy avelanay ho vita mora ny hosoka tamin'ny fifidianana"
Tonga nanatitra ny antontan-taratasy momba ny fandaniana ara-bolan’izy ireo teny amin’ny « cour des comptes” ireo kandida nilatsaka tamin’ny lisitra Komba. T
Mpitondra sy ny vahoaka Mila mifampatoky
Raha tarafina amin` ireo fanehoan-kevitra etsy sy eroa na amin`ny haino amn-jery na koa amin`ny tambajotra serasera dia miha marefo ny fifampitokisana eo amin`ny mpitondra sy ny vahoaka.
Raharaha nosy manodidina « Ao anatin’ny lalana frantsay ny fitsapan-kevi-bahoaka… »
Tsara ampahatsiahivina, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Rivellino Ravelomahazo,
Fitakiana ny Nosy Eparsa Hanao ankivy an’i Lafrantsa ny Afrikanina ?
Naneho fahasahina ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina nilaza fa famerenana ny Nosy Malagasy no takiana fa tsy fiaraha-mitantana amin’ny Frantsay. “Tsy misy hahasakana anay”,
Masoivoho Malagasy any Frantsa Nahatezitra olona maro ny fitavozavozany
50 andro taty aoriana vao nanao antso fifanomezan-tanana eo amin’ireo mpiray tanindrazana malagasy taraiky sy monina ao Frantsa ny ambasadin’i Madagasikara ao Paris mba tsy hilazana hoe izay vao nandray fepetra,
Antananarivo renivohitra Nesorina ireo box sy kioska miorina tsy ara-dalàna
Mitohy hatrany ny asan’ny kaominina Antananarivo renivohitra na dia ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana tanteraka aza isika.
Madagasikara Tsy hisy zava-banona anaty fisaraham-bazana
Malaza ny fanetsehana ny hambo-po Malagasy sy Afrikanina hanova ny tantara eto amin’izao tontolo izao izay zava-dehibe tokoa.
Alaotra Mitohy ny fanamboarana ny RN 44
izotra tsara ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena RN 44 , hoy ny sekretera nasionaly lefitry ny antoko AREMA Razafindrakoto Mamy Helson "Besetroka" avy any an-toerana ka ny 10 %
Fitsaboana Traditionnel Malagasy Miara-miasa amin'ny Hafari ny Dr Jean Pierre R
Tsy mpikambana ao intsony, efa lasa ao amin’ny FITRAMA Tsy mpikambana ao amin’ny FI ASTRAMA fitsaboana nentim-paharazana nisy azy nandritra ny 11 taona intsony dokotera Jean Pierre Rakotondranaivo.
Fifaninanana adin’akoho eto Madagasikara Mizotra any amin’ny fikarakarana lalao iraisam-pirenena
Isan-taona dia misy hatrany ny fikarakarana ny atao hoe BCM na “Bataille de Coq à Madagascar” nanomboka ny taona 2009, raha ny fanazavan’ny
Fakana an-keriny an’i Owne Alek Enin-taona aty aoriana, voasambotra i Abdi
Voasambotra koa i Nomenjenahary Sami na i Abdi ilay niray tsikombakomba tamin’ireo mpaka an-keriny naka an’i Owne Alek teratany indo-pakistanais.
Halatra tablette tany am-pianarana Olona 4 nidoboka am-ponja tany Toliara
Nitrangana vaky trano tao amina sekolim-panjakana EPP iray tao Toliara ny alin’ny 19 aprily 2020. V
Fivarotana rongony Lehilahy iray no tratra teny Ambohimahitsy
Lehilahy iray 30 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny STUP Anosy ny alarobia 13 mey 2020 teo tao Ambohimahitsy noho ny resaka fivarotana rongony.
Anosizato Mpatory an-dalana 260 natoka-monina...
Havaozina tanteraka ny Centre Fanantenana etsy Anosizato nametrahana ireo fianakaviana mpatory an-dalana izay voatery natoka-monina mandritra izao fihibohana izao.
Fahantrana eto Madagasikara Fitsinjarana tsy ara-drariny no antony
Ny fototry ny fahantrana dia ny tsy fananan` ny fanjakana vola. Tsy misy ny fiharin-karena (productivité) kanefa ny vokatra no avadika vola.
Hopitaly HJRA Efa miverina mandray ireo mararin'ny homamiadana
Efa afaka mandray ireo mararin’ny homamiadana soa aman-tsara na ireo olona tokony hanao chimiotherapie ny hopitaly HJRA etsy Ampefiloha.
Toamasina sy Ambatovy Minisitra 6 tonga masiaka nanao bemidina
Minisitra 6 be izao mpikambana ao amin’ny Governemanta no tonga tany Toamasina omaly, izay notarihin’ny Minisitry ny Atitany sady Filohan’ny CCO Covid-19.
Tafiatraka 15 ny voa Lasa ivon’ny covid-19 i Moramanga
Ny any Toamasina tsy voafehy, ary mifindra tsikelikely miha rakotra ihany koa i Moramanga, izay efa 15 sahady ny tranga tato anatin’ny andro vitsy. Efa azo sokajiana ho ivon’ny covid-19 eto Madagasikara na “épicentre”.
Roland Ratsiraka « Tokony tsaboina any an-tranony ireo tsy tena marary be »
Nanolotra vahaolana ny amin’ny tokony hiarahan’ny mpitsabo miankina amin’ny fanjakana sy tsy miankina ao Toamasina ny depiote ao an-toerana, Roland Ratsiraka, manoloana ny fahamaroan’ireo mararin’ny COVID 19 ao an-toerana.
Distrikan'Ikongo Tsy miasa saina amin'ny Coronavirus ny olona
Ny lalana ratsy sy ny kolikoly be misy eo anivon'ny fitsarana no zava-manahirana ny mponina any amin'ny distrikan'Ikongo misy anay, hoy ny depiote
Moramanga miatrika Covid-19 Misy mitady hamadika ho resaka politika
Mifamahofaho be ihany ny vaovao voaray avy any Moramanga mikasika ny fisiana vehivavy iray mpiasan'ny fahasalamana voalaza fa mitondra ny tsimokertina covid-19.
Tambavy CVO- Nigeria “Tsy fanao ny mandà fanomezana”
Nankatoavin` i Nigeria ny fanomezana ny tambavy Covid-Organics (CVO) avy amin` ny filoha Rajoelina.
Varika Mety voan'ny coronavirus ihany koa
Ankoatra ireo karazam-borona toy ny boloky dia anisan’ny tena tian’ny olona ary tezaina hiara-honina aminy ao an-tokantrano mihitsy ny varika na ilay antsointsika hoe: gidro hatramin’izay.
Fanatontosana fitiliana Ny ataon'iza no tena azo antoka ?
Nametram-panontaniana ny mpanara-baovao tamin` iny herinandro iny ny tarehimarika tsy mitovy navoakan` ny CCO sy ny an` ny OMS, 35 ny an` ny CCO raha 67 ny an` ny OMS.